သင်၏ UCL တည်းခိုခန်းကသင့်အကြောင်းဘာပြောသနည်း။ - သတင်း
သင်၏ UCL တည်းခိုခန်းကသင့်အကြောင်းဘာပြောသနည်း။
ဒီနေရာမှာမင်းရဲ့ခန်းမများကမင်းရဲ့စရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်စီရင်ချက်ဖြစ်တယ်။ မည်သည့်ခန်းမကိုမျှမပျက်စီးစေဘဲသင်၏ခန်းမများ၌စာရင်းထဲတွင်မပါရှိပါကသင်တစ်နေ့လျှင် ၉ ကြိမ်မေးမြန်းခံရသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု 'အကယ်၍ ဒါဘယ်မှာလဲ'
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ခန့်ကခန်းမကြီးတစ်ခန်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြန့်ကြာနေပြီ။ Ramsay မှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုသင်တွေ့ဖူးမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောချင်တာတစ်ခုတည်းကသူတို့မှာပါတီပွဲတွေကြီးကြီးမားမားရှိတာပါ။ ဒါပဲ။ ပါတီပွဲတွေကိုကြိုက်တယ်၊
ခင်ဗျားချမ်းသာတယ်၊ နိုင်ငံတကာလား၊ ၁ Cartwright ဥယျာဉ်တစ်ခုလိုပဲဒီကလေးတွေဟာအထက်တန်းလွှာအဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ခြေရာလက်နင်းသွားပြီး Balenciaga ကိုခြေရာခံရင်းမှားယွင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဟိုတယ်ကိုမကြာခဏမှားတတ်ကြသည်။ လုံခြုံရေးသည်ည ၁၁ နာရီတွင်လူတိုင်းကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောကြောင့်ရာသီဥတုအလွန်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အပူလွန်ကဲခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ ဥယျာဉ်ခန်းမ၏ခြုံငုံသတင်းစကားမှာ၎င်း၏အပြင်ပန်းသည်အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏အတွင်းပိုင်းလက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကိုမသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥယျာဉ်ခန်းမထဲ၌သင်ရှိနေခြင်း၏ဂုဏ်အသရေကိုအဘယ်သူမျှမယူသောကြောင့်၊ Tower Block တွင်ရှိနေသောကံဆိုးသောလူအားလုံးအတွက်ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ချင်သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကြီးမားဆုံးကြိုးစားခဲယဉ်း၏။ Wannabe BNOCS, ket-heads, rave goers (နံနက် 10 နာရီတွင် DnB ကစားခြင်းကိုရပ်ပါ) ။ သင်၏အခန်းပေါင်း ၉၉/၁၀၀ စီတန်းထားသောနေရာတွင်သင်၏တိုက်ခန်းများသည်အဓိကကျသောလမ်းတွင်ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိသော်လည်းသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုသတိမပြုမိဘဲမနေခဲ့ပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာ: အနောက်နိုင်ငံများအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်။
ဒုတိယအချက်မှာမင်းသည် Bartlett တွင်သင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်၊ အလွန်အေးသောလူသားများလုပ်နေသည်ဟုသင်ထင်နေသည်။ သငျသညျရှုပ်ထွေးမဟုတ်လျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းပြင်သစ် (ကမ့်ဘဲလ်အိမ် 2018-19 ငါနေထိုင်သူများအနည်းဆုံး 40% ပြင်သစ်စကားပြောသောပြောလိမ့်မယ်) ။ ကမ့်ဘဲလ်တွင်၎င်း၏အချိန်များရှိခဲ့သော်လည်း၎င်း၏ဘုံအခန်းနှင့်တူသကဲ့သို့ကျန်အားလုံးတော်တော်လေး shit ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘယ်လိုဂီတမျိုးသည် ၁၉၇၅ ဖြစ်သည်
၎င်းသည်ဝေးလံသောနေရာတွင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့သည် Lidl တွင်စျေး ၀ ယ်သည်ဟုပြောဆိုကြသောသူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအုပ်ချုပ်သောလူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အဖြစ်မှန်ဖြစ်တဲ့အခါ Waitrose ရှိသူတို့အားလုံးစျေးဝယ်ခြင်းသည်ပိုမိုနီးကပ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Langton ပါတီများသည်မည်သည့်အခါမျှစိတ်ပျက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သော်လည်း (ရဲများကပေါ်လာသောအခါအနိုင်ရသူအမြဲ) ဖြစ်လျှင်သင်သည်၎င်းအကြောင်းကိုတစ်နှစ်တည်းအတွက်သာပြောလိမ့်မည်။ ကျန်တဲ့ငါတို့ဂရုမစိုက်ဘူး၊ စိတ်မကောင်းဘူး x
သင် Waitrose သို့သွားသည်ဟုဝန်ခံသည် မှလွဲ၍ Langton နှင့်တူသည်။
မင်းမှာ en-suite ရှိပြီးလူတိုင်းကိုပြောတာမှလွဲပြီးဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်တဲ့သူ။ သင်ရုံ twat နဲ့တူကြည့်ပါ။
အေးမြသောအတိုကောက်များပင်မရှိပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်တကယ့်ကိုရှည်လျားသောဝေးလံသောနေရာဖြစ်သည်၊ နောက်ဆုံးတွင်ထိုတွင်နေထိုင်ကြသည့်လူများ၊
သငျသညျကမ့်ဘဲလ်၏ပိုကောင်းတဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ဆိုကြသည်ပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်သင်ရုံရုံကျောင်းဝင်းကနေနှင့်ခန်းမအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, Ratatouille နှင့် Rattus Rattus ချို့တဲ့။
John Tovell, Jesus, UCL က John လို့ခေါ်တဲ့ခန်းမကြီးတွေလို့ခေါ်ကြမလား။ တကယ်တော့မင်းတို့အကြောင်းငါပြောနိုင်တာကလူတွေကမင်းရဲ့ခန်းမတွေကိုအခြား John's တစ်ယောက်နဲ့ရောထွေးတဲ့အခါမင်းကိုတကယ်စိတ်ဆိုးမိတာပဲ! ငါတို့ကိုခဏအနားပေးပါ။
အားလုံးဒီတော့ Gower လမ်း၏ Ghost အပေါ်အဆောက်အ ဦး သရဲခြောက်တယ်လို့ဖြစ်လာကြသူတစ် ဦး ကအလွန်အမင်းအယူသည်းတစည်းသူတို့ကတခြားလူတွေရဲ့ခန်းမထဲမှာသူတို့ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းသို့မဟုတ်သူတို့အားလုံးအကြောင်းကိုသွားသောတစ္ဆေထက်သေဆုံးဖြစ်ခြင်း။
အဲဒါတောင်ရှိသေးရဲ့လား။ ဒါ့အပြင်ခန်းမများလား။ လူတွေအဲဒီမှာတောင်နေသလား။
မင်းရဲ့စရိုက်လက္ခဏာကိုမင်းဆိုလိုတာကမင်းဟာဘားတစ်ခုတည်းရှိတဲ့ခန်းမတွေလို့ပြောတာပါ၊ ဒါပေမယ့် Ed Milliband ကို 'မှားယွင်းစွာ' လို့သာကိုးကားပြီးပြောတာပါ။
ဒါ့အပြင်ဘားရှိသည်။ ခြားနားချက်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေထိုင်သူများအားလုံးသည်ဥယျာဉ်သို့မဟုတ် Connaught သို့မ ၀ င်ခဲ့ခြင်းအတွက်ငိုကြွေးလွန်းခြင်းကြောင့်၎င်းအားဖော်ပြရန်မေ့လျော့ခဲ့သည်။
ဒါက မက်စ် Rayne , Ifor အီဗန် နှင့်သူတို့အားဆီလျှော်ဘွဲ့လွန်ခန်းမ။ အကယ်၍ သင်သည်ပထမခန်းတွင်ဤခန်းမများမှသင်၏နံနက် ၉ နာရီအထိခရီးကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်သင်တံဆိပ်တစ်ခုရထိုက်ပေသည်၊ သို့သော်သင်ဤမျှဝေးလံသောနေထိုင်မှုကိုရပ်တန့်ပါ။
မက်စ် Rayne သင့်ရဲ့ဘုံအခန်းသည်အရက်သမားအမည်မသိအစည်းအဝေးများအတွက်ငှားရမ်းထားပါသလား သငျသညျအစဉ်အဆက်အတိတ်လမ်းလျှောက်ပါတယ်လျှင်သင်ကြီးမားသောစက်ဝိုင်းပတ်ပတ်လည်ထိုင်လျက်လူတစ် ဦး တည်းသာပြောသောကျပန်းလူများ၏အုပ်စုများအဘို့အအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်?
၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောပထမနှစ်ကမှကြားခဲ့ဖူးသော 'Flagship UCL Hall of Residence' ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဖွင့်လှစ်သောကျောင်းသားစင်တာတွင်လုံခြုံရေးကိုမြင်တွေ့ရပြီးနောက် Astor တွင်တူညီသောပြwillနာရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးနိုင်သည်။ သင်၏ခန်းမများအမှန်တကယ်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်သင်၏အချိန်အလွန်အကျွံကုန်ဆုံးခြင်းကိုပျော်မွေ့ပါ။
ဒီခန်းမတွေမှာငါပြောခဲ့တာထက်ပိုပြီးများတယ်ဆိုတာသေချာတဲ့အတွက်မင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအားလုံးပိုပြီးရှိမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ သင်၏မုန်းတီးစာကို [အီးမေးလ်ကာကွယ်ထားသည်။ ] x သို့ပို့ပါ